रोम, रोममा सब भन्दा विलासी आसपासका एक Absolut यात्रा
रोम यो एउटा सानो शहर हो जुन खुट्टामा खोजी गर्न सकिन्छ। यसको धेरै वरपरहरूको पैदल यात्रा घमाइलो दिनमा अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ, त्यसैले यस भ्रमणमा तपाईं आकर्षक र आकर्षकलाई याद गर्न सक्नुहुन्न। छिमेकी Prati।
प्रतिष्ठा एक गन्तव्य हो जुन यसको एभिन्यूज, यसको भव्य भवनहरू र यसको लागि प्रख्यात छ यूरोपीयन आकर्षण। योसँग धेरै व्यक्तित्व छ, यो पेरिस जस्तो देखिन्छ, त्यसैले आज हामी यहाँ वरिपरि के गर्न सक्छौ भनेर हेर्न जाँदैछौं।
2 प्रतिमा के हेर्ने
यो हो रोमको बाईस क्वाटर र यसको हतियारको कोटमा ह्याड्रियनको मूसोलियम सामेल छ, यसको सबैभन्दा प्रतीकात्मक साइटहरू मध्ये एक (यो वास्तवमै बोर्गोको हो भने पनि)। तर यस मनमोहक रोमन छिमेकीको इतिहास के हो?
लाग्छ कि रोमन साम्राज्यको समयमा यी देशहरू दाखबारी र झाडीले ओगटेका थिएयसैले यसलाई होर्ती डोमिटि भनियो, र यो डोमिशियन स्वास्नीको हो। पछि यसले यसको नाम प्रता नेरोनिस राखियो, र मध्य युगको दौडान यसलाई प्रता सान्ती पेट्री वा सान पेड्रोको क्षेत्रहरू भनिन्थ्यो।
क्षेत्र १ th औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हरियो रह्यो, जहाँ झाडीहरू, दलदलहरू र चरिरहेका भूमिहरू बीचमा अझै त्यहाँ केही फार्महरू थिए, विशेष गरी मोन्टे मारियोको ढलानमा। तर 1873 मा त्यस जमिनको ठूलो हिस्साको तत्कालीन मालिक, जेभियर डे मरोडेले सुरु गर्न नगरपालिकासँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे नयाँ जिल्ला बनाउनुहोस्। दश वर्ष बित्यो जब प्रथम भवनहरूले प्रकाश देखेनन्।
यद्यपि, राम्रो पूर्वाधार नभएको कारण यो छिमेकी लामो समयसम्म सीमान्त रह्यो र यो पृथक भएको देखिन्थ्यो। वास्तवमा, मोरोडले आफ्नी जेबबाट पैसा तिरेर सञ्चार मार्गहरू खोल्न फलामको पुलमा काम गरे। यो २० औं शताब्दीको सुरुमै शहरले जिल्लाको शहरी समस्याहरू समाधान गर्ने क्रममा काम गर्न शुरू गर्यो। कसरी? साधारणतया यहाँ इटालीको नयाँ राज्यको प्रशासकीय कार्यालयहरू निर्माण गरियो।
सडकको लेआउट एक विशिष्टता संग बनाइएको थियो: के तिनीहरू कसैबाट पनि स्यान पेद्रोको बासिलिका देख्न सकिएन। त्यतिबेला भ्याटिकन र नयाँ सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन, त्यसैले यहाँ वरपरको सडक वा वर्गमा पोपहरू वा सन्तहरूको नाम छैन।
नयाँ काममा जमिन भरिने काम पनि समावेश गरिएको थियो, जसले गर्दा टाईबर नदीको बाढी आउन नपरोस्, तर जमिनको गीला स्थिरताको कारण यो सजिलो थिएन। तर जे भए पनि, नयाँ भवनहरू मशरूम जस्तै उदाउन शुरू भयो, सबै २० औं शताब्दीको पहिलो आधा र उही समानमित सडकहरूमा।
प्रतिका मुख्य सडकहरू हुन् कोला डि रिएन्जो मार्फत, ला Cicerone मार्फत, ला मार्कन्टोनियो कोलोना र लेपान्टो। यी सबै सडकहरू प्रतिष्ठानको मुटु हो। उत्तरमा छिमेकमा डिला भिट्टोरिया, पूर्वमा फ्लामीनियो छिमेकको साथ, दक्षिणमा पोंटेको साथ र पश्चिममा ट्राइन्फेलसँग छ।
प्रतिमा के हेर्ने
जब तपाईं हिंड्नुहुन्छ सडक र वर्ग रोमन साम्राज्य को व्यक्तित्व को नाम मा तपाईं जस्तै केहि राम्रा भवनहरू देख्नुहुनेछ अदालत र सुन्दर एड्रियानो थिएटर। यो थिएटर १ 1898 XNUMX in मा उद्घाटन गरिएको थियो, आज यो सिनेमाको रूपमा काम गर्दछ र ला पियाजा काभोरमा छ।
यसको अंशको लागि, प्यालेस अफ जस्टिस १ 1888 र १ 1910 १० बीचमा निर्माण गरिएको थियो र यसलाई एउटा भव्य भवन मानिन्छ, जुन रोमलाई इटालीको राजधानीको रूपमा घोषणा गरे पछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। भूभागको प्रकृतिका कारण यति धेरै आर्द्रतासहित, यसलाई बलियो विशाल ठोस आधारहरू प्रदान गर्नुपर्‍यो जुन २० औं शताब्दीको s० को दशकसम्म रह्यो जब यसलाई फेरि सुदृढ पार्नु प .्यो। यो छ बारोक र नवजागरण शैलीयो १ meters170 मिटर बाय १ .155 मिटर छ र सबै ट्र्याभर्टाइन चूनढुंगा हो।
प्रतीति यो शान्त छिमेक हो, एक राम्रो विकल्प यदि तपाईं हडताल र हलचल चाहनुहुन्न भने। यो शहरको बाँकी भागमा राम्रोसँग जडान भएको छ, तर यो अझै आवासीय र शान्त छ। पनि यो धेरै सुरक्षित छिमेक होयद्यपि यो भ्याटिकनको आशिष्मा जन्मेको थिएन, पोपको निवास एकदम नजिक छ।
त्यसोभए प्रतिमा गर्न सक्ने सबैभन्दा उत्तम कुरा हो हिंड्नुहोस्, यसको सडकमा हराउनुहोस्। तपाईं भ्याटिकनबाटै सुरू गर्न सक्नुहुनेछ, सेन्ट पीटरको बासिलिका वा भ्याटिकन संग्रहालयहरूको भ्रमण गर्नुहोस् र त्यसपछि हिंड्न सुरु गर्नुहोस्। यसैले, तपाईं पनि मा चलाउनु हुनेछ चर्च अफ सक्रेड हार्ट अफ मफरेज, सानोमा मिलान क्याथेड्रलको रूपमा पनि चिनिन्छ किनकी यसको सुन्दर नियो-गोथिक फ्याडेड छ।
यहाँ भित्र काम गर्दछ Purgtory आत्माको संग्रहालय, अलि अन्धकार, मृतको फोटोसहित ... चर्च १ 1917 १ in मा निर्माण गरिएको थियो। भित्र सुन्दर अंग पनि छ।
El ओलम्पिक स्टेडियम यो प्राटीमा पनि छ। यसको उद्घाटन १ in 1953 मा भएको थियो जबकि यसको इतिहास १ 20 २० को दशकको हो किनकि त्यहाँ एउटा सानो फासिस्ट स्टेडियम थियो। यहाँ १ 1960 .० को ग्रीष्म ओलम्पिकको उद्घाटन र समापन समारोह आयोजना गरियो र यो १ totally 1990 ० फिफा कप र फेरि २०० 2008 मा पूर्ण रूपमा मर्मत गरिएको थियो।
प्रतिष्ठाको सब भन्दा राम्रो किनमेल सडक भनेको भो कोला डि रीजो हो। तपाईं तारहरू देख्नुहुनेछ कपडा स्टोर, सानो बुटीक र रेस्टुरेन्ट। ऐतिहासिक केन्द्रमा भन्दा उनीहरूसँग राम्रो मूल्य छ, त्यसैले यो पैसा बचाउनको लागि एक राम्रो विकल्प हो। तिनीहरूको बासस्थान? क्लर्कहरू, क्लर्कहरू, मान्छेहरू राम्रो तलबका साथ यो रोम मा सबै भन्दा राम्रो आर्थिक क्षेत्र हो। होशियार हुनुहोस्, यो धेरै आन्दोलनको साथ सुपर लोकप्रिय छिमेकी हो भनेर नसोच्नुहोस्, होईन, वास्तवमा यो टुरिस्ट सर्किट बाहिरका छिमेक हो र कहिलेकाँही रोमीहरू पनि यहाँ आउँदैनन्।
हो, हो, यो सेन्ट पिटरको बासिलिका र भ्याटिकनको धेरै नजिक छ, तर पर्यटकहरू प्राय: जसो आउँदैनन्। र तिनिहरु जो सजिलै बाट Via Cola di Renzo, जो पसल केन्द्रित संग टहल्छन्। तर यदि तपाइँ बढि चाहानुहुन्छ भने तपाईले केहि अगाडि सर्नु पर्छ। उदाहरण को लागी, bequeath Viale Giulio Cesare क्षेत्र, एक बहु जातीय क्षेत्र जहाँ संसारभरका मानिसहरु सँगै बस्छन्।
स्पष्ट रूपमा, त्यहाँ धेरै अरब र भारतीयहरू छन् उनीहरूको सम्बन्धित व्यापारिक स्टोरहरूसँग। र यदि तपाइँ इटालीको माध्यम बाट यात्रा गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने त्यहाँ एक राम्रो बुक स्टोर छ, टुरि Club क्लब, जसमा गाईडहरू र नक्शा बीचका यात्रीहरूका लागि सबै कुरा छ। डी रोमा मूर्तिले हामीलाई स्वागत गर्दछ रिसोर्जीमेन्टो ब्रिज। यो पोलिश मूर्तिकार इगोर मोटोरजले बनाएको हो र उनीसँग एक अति उदास र रोमान्टिक अनुहार छ।
साथै पैदल पनि तपाईं धेरै देख्नुहुनेछ उम्बरटिनो शैली भवनहरू, सामान्य १ XNUMX औं शताब्दीको इटालियन शैली र धेरै आर्ट-नोव्यू शैली विलाहरू। त्यहाँ पनि छ तर्कवादी शैली भवनहरू, मुसोलिनी अवधिबाट, र केहि रोकोको शैली। स्पष्ट रूपमा त्यहाँ केहि अझ आधुनिक भवनहरू छन्, जस्तै RAI भवन, सबै शीशा र ऐनाले बनेका, वा पूर्व नगरपालिका, १ 1973 .XNUMX क्रूरतावादी शैलीको भवन जुन आज धेरै रंगीन विन्डोजहरू छन्। एउटा फोटो जुन तपाईंले लिन लाग्नु भएको छ!
प्रतिष्ठानको अर्को क्षेत्र हो डेले भिट्टोरी, जिल्लाको योजना १ 1919 १। मा भयो जुन प्राय: मा स्थित छ पियाजा माज्नी वरिपरि र फासिस्ट अवधिमा निर्माण गरिएको घरहरू द्वारा विशेषता, खुला खुला आंगनको साथ। यी भवनहरूमध्ये जुन हामीले अहिले सम्म नामकरण गरेका छौं, ती विवरणहरू सम्झनुहोस् जुन ढोका, विन्डोज र बालकनीमा साँच्चै सुन्दर छन्।
यदि तपाई बाइक चलाउन चाहानुहुन्छ प्रतिष्ठामा त्यहाँ केही बाइक पथहरू छन् Viale एन्जेलिको देखि रोम को उत्तर एक अधिक उपनगरीय क्षेत्र, Castel Giubileo सम्म। यो एउटा सुन्दर पैदल यात्रा हो जुन नदीको किनारमा बग्दछ र खुला मैदानमा हराउँछ वा रोमको ग्रामीण इलाकामा के हुन्छ। अर्को बाइक मार्ग उही बिन्दुमा सुरु हुन्छ तर टाढाबाट पियाजा काभोर जान सक्दैन।
त्यहाँ प्रतिष्ठानमा हरियो ठाउँ छ? ठिक छ, त्यहाँ कुनै पार्क उचित छैन कि आफ्नो खुला अतीत र दाखबारीहरु सम्झना। त्यहाँ नदी तट छ, बाइक मार्ग उसको छेउमा जहाँ व्यक्तिहरू प्राय: हिँड्दछन् वा दगुर्छन् र अरू भन्दा बढी गर्दैनन्। सायद किनार नजिक वा डु hidden्गामा केही लुकेका बारहरू।
प्रति रोम रोममा सब भन्दा लोकप्रिय छिमेकी नहुन सक्छ तर म तपाईंलाई बताउँछु यदि तपाईं अगस्तमा जानुहुन्छ भने यो उत्तम समय हो सबै को। वास्तवमा, जुलाई १ र सेप्टेम्बर between बीचको कुनै पनि समय राम्रो समय हो, किनकि मौसम आदर्श छ, त्यहाँ सडकमा घुम्दै मानिसहरू छन्, तपाईं ग्रीष्म रातमा क्यास्टेल स्यानट एन्जेलोको संग्रहालय भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, उच्च- बोर्गो पाससेटको उदय पदयात्रा, जहाँ पोपले भ्याटिकनबाट महलमा शरण लिए, र सेन्ट पीटर बासिलिकाको गुम्बजको बाटोमा प्रशंसा गरे। बहुमूल्य।
यो पैदल यात्रा गर्न तपाईंले भुक्तानी गर्नुपर्दछ तर समान टिकटको साथ तपाईं किल्ला र यसको सुन्दर हल र आँगनको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ वा टेरेसमा जान सक्नुहुन्छ र यसका अद्भुत दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » रोम, रोममा सब भन्दा विलासी आसपासका एक